Indlela Yokuvimbela Ugaxekile Wokudlulisa Nge-WordPress Plugin - Iseluleko se-Semalt
Ugaxekile wokudlulisa ukucolisa i-akhawunti yakho ye-Google Analytics ngolwazi olukhohlisayo futhi usebenzise ithrafikhi eliphansi kakhulu ukuthuthukisa okuqukethwe kwakho kwi-intanethi. Lapho i-akhawunti yakho ye-Google Analytics ibonisa ukubukwa okuningi, amathuba ukuthi isayithi lakho seliqalile ukuthola imoto engafanele. Abakwa-Spammers basebenzisa izindlela ezihlukahlukene zokukhiqiza izimali, futhi uma uchofoza izixhumanisi zogaxekile zokudlulisa isimo sabo sizothuthukiswa kwimiphumela yosesho . Ngisho noma ungachofozi izixhumanisi zabo, bazokhipha izibuyekezo zakho ze-Google Analytics, futhi ngeke ukwazi ukwabelana ngemibiko engcolile nanoma ubani ebhizinisini lakho. Ngenhlanhla, amanye ama-plugin we-WordPress aklanyelwe ukuvimbela ugaxekile we-referrer ungathinti idatha yakho ye-Google Analytics futhi ufinyelele isayithi lakho.
U-Oliver King, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende Semalt , unikeza ezinye izindaba ezithakazelisayo ngalokhu.
Uma ungakaze usebenzise i-Google Analytics kuwebhusayithi yakho, kuyithuluzi elikhulu ongaqala ngalo. I-Google Analytics ikuvumela ubone ukuthi abasebenzisi bahlanganyela kanjani namakhasi akho wewebhu. Ungabona nokuthi yiziphi izihloko ezithola ithrafikhi ngaphezulu kunezinye. Kungenzeka ukulandelela ukuchofoza kwezixhumanisi bese uqhuba ukuhlolwa kwe-split. Wonke umuntu ufuna ukuthi iwebhusayithi yakhe ibonakale kwi-intanethi, kepha abakwa-spammers bokudlulisa bathatha izinzuzo zamasu ethu we-SEO ngokuthumela okuningi ukubukwa kwamanga kumasayithi ethu. Babuye bafake amakhulu kumakhulu ezinkripthi namakhodi ukulimaza isikhundla sesayithi lethu kwi-intanethi..Ama-URL abo avela ku-Google Analytics yakho futhi ayithinta amawebhusayithi angenakubalwa njalo ngenyanga.
Kungani udinga ukukhathazeka nge-spam yokudlulisela?
Abanye bangase bacabange ukuthi i-spam yokudlulisela ingozi futhi iphephile ngaphandle kokuthi othile echofoze ezixhumaneni, kodwa akunjalo. Ngisho noma ungachofozi izixhumanisi, i-spam yokudlulisela ingathinta imibiko yakho ye-Google Analytics. Emabhizinisini amancane naphakathi, ugaxekile wokudlulisela angaba yingozi enkulu ngoba uzobhubhisa amasayithi abo ngesikhathi esithile. Uma uthengisa okuthile ngokusebenzisa iwebhusayithi yakho, awukwazi ukukhomba amakhasimende afisa ngenxa yokugaxekile kogaxekile.
Ukuvimba okufakwe ku-Spam ku-WordPress ngama-plugin
Ama-plugin we-WordPress ambalwa angakusiza ukuthi ugcine ugaxekile wokudlulisela okungenani. Into ejabulisayo kakhulu ukuthi cishe zonke lezi plugin zikhululekile futhi zingafakwa ngokushesha. Asinayo imithwalo yemiphumela emibi futhi singanikeli ukwesekwa okungakhokhiwe noma imiyalo, ngakho kufanele ugcine njalo amafayela akho ngaphambi kokufaka noma iyiphi i-plugin ye-WordPress.
I-plugin yamahhala, edumile ngokusebenzisa ama-blacklists avuselelwe ngokuzenzakalelayo agcinwe ngumlobi. Uma usufakiwe ngokugcwele, i-plugin kulula ukuyilungisa futhi ingezwa kusayithi lakho ngokulula.
Amanye ama-plugin amasha, njenge-Referrer Spam Blocker no-Block Referral Spam, asethwe amasonto ambalwa edlule, kodwa lawa ma-plugin awazange athole amazwana anelisayo avela kubagxeki, ngakho-ke akunakwenzeka ukubahlulele ngokufanele.
Sicela wazi ukuthi ama-plugin we-WordPress awakwazi ukuvimba ugaxekile we-Ghosts kusuka ku-4masters.org, webmaster-traffic.com, i-darodar.com, ne-co.lumb.co. Sincoma ukuba uhlunge ugaxekile wokudlulisela ku-akhawunti ye-Google Analytics ukuvimbela isayithi lakho ekutholeni ukuvakashelwa okungamanga okuthunyelwe.